Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo al-Shabaab kula dagaallamay Yurkud - Sabahionline.com
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo al-Shabaab kula dagaallamay Yurkud Maarso 11, 2012
Dagaallo dhex maray ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa Itoobiya iyo dagaalyahaniinta al-Shabaab oo ka dhacay tuulada Yurkud eek u taalla Soomaaliya Sabtidii (10-ka March) ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo labada dhinac ka dagaallamayey, AFP-da ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
2 sarkaal ayaa dhintay ka dib markii ay al-Shabaab Garbaharey weerartay
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo al-Shabaab ka qabsaday Xuddur Jidka Afgooye oo dib u furmay ka dib dagaalkii Dayniile Sarkaal kuwa dawladda raacsan ah oo la yiraahdo Khaliif Aaden ayaa sheegay in ay al-Shabaab Yurkud soo weerareen subixii Sabtida ahaa. “Qaar badan oo ka mid ah ayaa laga diley intii uu socday dagaalka kharaar. Dagaalku haatan waa dhamaaday al-Shabaabna si xooggan ayaa looga adkaaday,” ayuu ku yiri AFP-da. Taliye al-Shabaab ah oo la yiraahdo Sheekh Maxamed Abuu Faaduma aya isaguna guul sheegtay. “Dagaalyahaniinta mujaahidiinta ayaa weerarkoodii ugu guusha badnaa ku qaaday baraha uu cadawgu ka joogey Yurkud,” ayuu yiri. Ilaha Milliteri ee labada dhinac ayaa sheegay tiro dhimasho oo kala duwan, balse labaduba waxay qireen in uu dhacay dagaal faraha looga gubtey oo soconayey saddex saacadood, sida ay AFP-du sheegayso. Yurkut ayaa ku taalla meel muhim ah oo ah jidka xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya ku xira Baydhabo oo ahayd kob koofurta Soomaaliya ku taalla oo ay hore al-Shabaabku ugu xoogganaayeen oo ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya dib u qabsadeen bishii hore. Ma jeclaysatay maqaalkan?